सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग असोजमा हुने, खेलाडीहरु हर्षित, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग असोजमा हुने, खेलाडीहरु हर्षित
डिसी नेपाल , २ जेठ २०७५
काठमाडौं । करिब चार वर्ष यता हुन नसकेको सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग आसोजमा हुने पक्का भएको छ । बुधबार अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको मुख्यालय ललितपुरमा बुधबार बसेको बैठकले प्रतियोगिता असोज १३ देखि माघ १६ गतेसम्म चल्ने घोषणा गरेको हो ।
कर्मा छिरिङ नेतृत्वको नयाँ कार्यसमिति एन्फामा निर्वाचित भएपछि समितिले ए डिभिजन राष्ट्रिय लिग आयोजना गर्ने उद्ध्घोष गरेको थियो । बुधबारको बैठकले प्रत्यक टोलीले लिगका लागि कम्तीमा १८ खेलाडी दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान बनाएको छ । तर एक टिमले ३५ खेलाडीसम्म राख्न सक्छन् ।
यसपटकको प्रतियोगितामा १४ टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । लिगमा नेपाल पुलिस क्लब, एपिएफ क्लब, त्रिभुवन आर्मी क्लब, रुस्लान थ्री स्टार क्लब, लक्ष्मी हुण्डाई मनाङ–मस्र्याङ्दी क्लब, जावलाखेल युथ क्लब समावेश छन् ।
यस्तै फ्रेन्डस् क्लब, संकटा क्लब, मच्छिन्द्र क्लब, सरस्वती युवा क्लब, च्यासल युथ क्लब, न्युरोड टिम (एनआरटी), ब्रिगेड ब्वाइज क्लब हिमालयन शेर्पा क्लबले ए डिभिजनमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । च्यासल र एनआरटी भने ‘बी’ डिभिजन बाट पछिल्लो पटक ए डिभिजनमा बढुवा भएका टोली हुन् ।
एन्फाले खेल मैदानको बारेमा भने केहि जानकारी दिएको छैन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले नेपाली खेलकुदको पावर हाउसको रुपमा चिनिएको रंगशाला अबको तिन महिनाभित्र पुननिर्माण भईसक्ने बताएको छ । रंगशाला चाँडै पुननिर्माण भए खेल दशरथ रंगशालामै हुने अनुमान गरिएको छ ।
के भन्छन् राष्ट्रिय टोलीका कप्तान विराज महर्जन ?
वि.सं २०७० सालयता हनु नसकेको प्रतियोगिता आसोजमा हुने भएपछि नेपाली फुटबल खेलाडीहरु खुशी भएका छन् । मनाङ मस्र्याङ्दी क्लबमा आवद्ध नेपाली राष्ट्रिय टोलीका कप्तान विराज महर्जनले ‘ए’ डिभिजन प्रतियोगिता हुने भएपछि आफू एकदमै खुशी भएको बताएका छन् ।
‘ए’ डिभिजनका खेल स्तरीय हुने भएकाले सम्पूर्ण खेलाडीको क्षमता प्रतियोगिताले देखाउने महर्जनको भनाई छ । करिब ४ बर्षयता प्रतियोगिता हुन नपाउँदा आफूहरु मोफसलका खेलहरुमा सक्रिय हुन परेको उनको गुनासो छ ।
मोफसलको खेलले आफूहरु व्यस्त त हुने तर स्तरीयताको हिसाबले ए डिभिजन खेल अपरिहार्य रहेको उनको भनाई छ । महर्जनले भने “लामो समयपछि ए डिभिजन खेल हुन लागेको छ । म एकदमै खुशी छु ।
ए डिभिजनमा सबै उत्कृष्ट समावेश भएका हुनाले खेलहरु प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छन् । प्रतिस्पर्धात्मक खेल भएपछि राम्रा खेलाडीको जन्म हुन्छ ।” उनले आपूmले यस प्रतियोगितालाई लामो समयदेखि कुरेर बसेको प्रतिक्रिया दिए ।
उधुम केही भएको छैन प्रधानमन्त्रीज्यू, धैर्य गर्नुहोस्!
प्रधानमन्त्री ज्यू! म देखाईदिन्छु भष्ट्रचार, कार्बाही गर्ने खुबी छ?
सरकार गठनको एक वर्ष : त्रासमा जनता!
ओली सरकारको एक वर्ष ‘कामभन्दा कुरा धेरै’
एकवर्षे रिपोर्ट कार्ड जाँच्दा सरकारलाई उत्तीर्णाङ्क दिन मिल्दैनः प्रकाशशरण महत
टुडिखेलमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन र मञ्चका दृश्यः सन्दर्भ प्रजातन्त्र दिवस । PM KP Oli Speech .
संघीयता कार्यान्वयनमा असमझदारी: केन्द्र भर्सेज प्रदेश सरकार ।
संसदमै लुट्न सके लुटको दोहोरीः सत्ता र प्रतिपक्ष सांसदले तलव दान गर्ने घोषणा । Lutna Sake Lut l
हामीलाई कुकुर भन्ने ? युवा संघ अध्यक्ष रमेश पौडेलको आक्रोश । Lutna Sake Lut l Pashupati Sharma l